Nzira yekusarudza sei mhizha yemuenzaniso wekutengeserana kwako?
Nguva: 2018-Aug-17 Hits:
Wakambosangana vakapinda pashoo? Zvino sei kusarudza yakanaka zvokushandisa dumba yenyu?
Tinogona kuwana mhinduro seyi inotevera:
Kazhinji kambani inofanirwa kuenda kuratidzwa kuitira kuti iratidze marashi avo kana mutsva wezvigadzirwa / teknolojia, tinogonawo kuchengetedza kubatana nevatengi vekare kuburikidza nekuvakoka kumusasa wekuratidzira.
Tisati taenda indasitiri chokuratidza, tinofanira kuita chirongwa kambani yedu, chokutanga, pfungwa huru ndiyo bhajeti. Kana uine mari yakakwana, unogona bhuku nzvimbo yakakura. Kana bhajeti yenyu iri shoma, unogona bhuku deko zano uye ndiwedzere kwariri.
Kana wangove wakagadzira dumba, iwe unofanirwa kusarudza zvinhu zvakanaka zvekuratidzira kwako.
Nokuti goko zano, unogona kusarudza munhu modular kuratidzwa chigadzirwa, akadai octanorm maxima Hurongwa, kuti vaswedere yakawanda Dumba wako, unogona zvakare kuisa mureza kumira pamberi pakuratidza dumba uye kuti zvimwe kukwidziridzwa. Kana uchida kuratidza chigadzirwa wako , unogona kutenga imwe pasherefu mumabhuraketi uye ukomba. kuwana kunonyanyisa chaizvoizvo unogona kushandisa kwako inoratidzirwa Panel kunamatira vamwe posita kusuma boka rako uye chigadzirwa.
Kana muchida kakawanda kushandisa midziyo yenyu kuratidzwa, unogona kusarudza inotakurika zviratidzwa pani, akadai Pop kumusoro akaratidza pani, mureza anomira uye backlit kuratidza rusvingo. Vose, backlit vanoratidza nengoro ndiwo zvikuru nevanhu mumakore achangodarika, nokuda kwavo zvakavhenekerwa chitarisiko uye unochinja Graphics, kunze vari nyore kuisa uye zvifambiso. unogona kudhinda pfungwa dzenyu pamusoro Graphics, kuti shoma mari yako, unogona kushandisa mifananidzo inokukurudzira kumusoro anomira kana mureza kumira.
Nokuti Dumba hombe, unogona kushandisa truss yakarongeka kuvaka, ivo mutengo-inobudirira. Zvichakadai, aruminiyamu truss dumba inogona zvakagadzirirwa mukati zvakasiyana chimiro uye kukura. Vanogonawo batanidza pamwe zvokushandisa kuti vauye kwamuri LEVEL.
Zvekare: Ungagadzira sei nhanho?
Zvadaro: CL Stage Truss paAsia Games 2018